China CE Uluhlu lwe-LED yoPhumo oluNgxamisekileyo lokuPhuma kunye neFektri | Saselux
① [Iqinisekisiwe i-CE] I-SASELUX ekhokele imeko engxamisekileyo yokubaleka kweempawu zezibane zavavanywa kwiimfuno zeSetifikethi se-CE. Ukudodobalisa umlilo, inaliti ebunjiweyo yezindlu ze-thermoplastic, iMigangatho yeZibane eziNgxamisekileyo, Amandla kunye nezixhobo zeYunithi.
② [Iwaranti yonyaka emi-5] Uphawu lomlilo lokuphuma eSASELUX sele lupasile isiqinisekiso se-CE. Siyathembisa iminyaka emi-5 iwaranti kumalungu ombane nakwizindlu, iminyaka emi-2 iwaranti yebhetri. Olu PHAWULELO LOPHA SIGN sinenkonzo yasemva kokuthengisa. Ukuba awonelisekanga nangasiphi na isizathu, pls qhagamshelana nathi kwaye siya kukunika inkonzo eyonelisekileyo. UMGANGATHO OPhakamileyo ngexabiso eliphantsi yeyona njongo yethu iphambili.
③ [Iiyure ezingama-50000 zeXesha lokuPhila kunye nokuKhanya okuPhakamileyo] Ibhetri yokubuyisela umva esetyenziswe koku kukhanya okungxamisekileyo ngeempawu inokuphinda iphinde iphinde iphinde iphinde isebenze kangangemizuzu engama-27000 ubuncinci. Zonke iintlawulo zingasetyenziselwa ukusebenza okungxamisekileyo kwemizuzu engama-180. Nceda uqaphele ukuba ukukhanya kwesibane kufuneka kube nentambo. Kwaye ixesha lokuphila kwalo mqondiso wokuphuma ziiyure ezingama-50000.
④ [Umgangatho ophezulu] Owona mgangatho uphezulu sisithembiso kubo bonke abathengi. Olu phawu lukhanyayo lwenziwe ngezinto ze-THERMOPLASTIC ABS HOUSING. Oku akuyi kuguga emva kokusebenzisa ixesha elide kwaye kuqinisekisa ukomelela kwesakhiwo ngasinye ngexesha lofakelo kunye nokudityaniswa. Iqhosha lokuvavanya elisetyenziswe koku kukhanya okungxamisekileyo kuye kwenziwa iimvavanyo ezili-1000 ukuqinisekisa ukuba ukukhanya okungxamisekileyo kunokukhanyisa ngokuzenzekelayo ngexesha lokusilela kwamandla, kwaye iqhosha lokuvavanya aliyi kusilela emva kokuba amandla ebuyile.
About [Malunga ne-SASELUX] I-SASELUX yasekwa ngo-2011, inamava atyebileyo kwimveliso ekhokelela ekukhanyeni okungxamisekileyo nakwimveliso zombane iminyaka emininzi. Njengophawu olujikeleze lonke olubandakanyeka kuphuhliso, imveliso, ukuthengiswa kunye nenkonzo yokukhanyisa kunye neemveliso zombane kwiimarike kwihlabathi liphela, sibandakanya ubuchwephesha bobugcisa kuyilo lweemveliso kunye neenkqubo zokuvelisa. I-SASELUX ithengisa iziqwenga ezingama-70 ezigidi zeemveliso zombane minyaka le. Ngoku, silapha kuwe ngalo lonke ixesha, kunye neemveliso ezilungileyo.
Egqithileyo Uphawu loPhawu loMlilo oluDumileyo eOstreliya
Okulandelayo: Uphahla okanye ukuxhoma ukuphuma komlilo kuLuphawu oluDumileyo eYurophu
Izibane eziKhanyayo zoRhwebo
Izibane eziNgxamisekileyo zokuGcina
Phuma ukuKhanya ngeNgxakeko
Phuma ukuKhanya ngezibane
Phuma Light Ukukhanya
Phuma Iimpawu Ngezibane